Hay’adda UNDP oo soo saartay daraasaad ku saabsan sabaha dhalinyarada Africa ay ugu biiraan kooxaha xaq-jiriinta | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Hay’adda UNDP oo soo saartay daraasaad ku saabsan sabaha dhalinyarada Africa ay...
Hay’adda UNDP oo soo saartay daraasaad ku saabsan sabaha dhalinyarada Africa ay ugu biiraan kooxaha xaq-jiriinta
Hay’adda UNDP ee Jimciyadda Qurumaha ka dhexeysa ayaa soo saartay Warbixin cusub oo ay ku sheegtay in sababaha ugu weyn ee dhalinyarada Africa ku riixaya in ay ku biiraan kooxaha xagjiriinta ay ugu wacan tahay saboolnimada, shaqo la’aanta iyo fursadaha nolosha oo aan soo gaarin.
Warbixintan oo ah tii ugu horreysay ee nooceeda ah ay ee ay soo saarto Hay’adda UNDP ee QM u qaabislan dhanka mashaariicda horumarinta, ayaa lagu soo bandhigay kulan ka dhacay magaalada Newyork ee xarunta QM.
Xog u ruurin iyo wareysi lala yeeshey ,n ilaa 495 dhalinyaro ah oo ku biirey Alshabaab iyo Boko Haram taasi oo hay’adda UNDP wadday muddo ku dhow 2 sano, ayaa muujinaysa in sababa ugu badan ay qeyb ka yihiin duruufo badan sida iyagoo ka baqaya in loo awood sheegto ama dhibaatooyin kale.
Wakaaladda wararka SONNA oo soo xiganaysa warbixnta UNDP ayaa sheegtay in ilaa 6 wadan oo kamid ah Africa ay saameeyeen rabshadaha argagixisanimada ku dhisan, waxaana kamid ah, Burkina Faso, Cameroon, Côte d’Ivoire, Nigeria, Somalia iyo Uganda sida daraasaadkaasi lagu sheegay.
Waxaa war bixinta baaq looga soo jeediyay Dowladaha in ay dib u eegis ku sameeyaan howlgalada military ee dhacaya, si looga gaashaanto, xad gudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanah.
Dhalinyarodo ma helin fursado wax barasho waxaa sidoo kale jira dhibaatooyin kale oo ka dhashey dhaqaale la’aan qoysaska taasi oo sahlaysa in dhalinyarada looga faa’idaysto arrimahaasi oo is biirsaday.
Agaasimaha hay’dda UNDP Abdoulaye Mar Dieye o warbixintaasi ka jeediyay xarunta QM ee magaalada Newyork aya sheegay in ka bar oo bar bulshooyinka ku nool Qaaradda Africa ay ku nool yihiin nolol aad u hooseysa,waxaa bar bar socda sida warbixinta lagu sheegay shaqo la’aan baahsan oo haysata dhalinyaradda wadamada Africa intoodi badan.
Xog u rurinta warbixinta ayaa saldhig u ahaa su’aalaha ku aadan, duruufaha qoysaskooda,fursadaha koriimada iyo waxbarashada,iyo aqoontoodi diimeed iyo fikrad ahaan wax ay aamin sanyihiin kuwaasi oo qeyb ka ah wax yaabaha horseeda in dhalinta ku nool wadamada Aftica ay kooxaha hubaysan ay ku biiraan.
Hay’adda UNDP ayaa sheegtay in dad lagu qayaasayo 33,300 qof ay naftoodi kku waayen rabshadaha Argagixisanimo, intii u dhexeysay 2011 ilaa 2016 ,weerarada Bokoharaam kaliya ayaa waxaa ay sababeen dhimashada 17,000 iyo barakacaya 2.8 milyen kuwaasi oo u qaxay wadamada deriska ah.
Wadamada Kenya iyo Nigeria ayaa la sheegay in sidoo kale rashadahaasi hubaysan ay saameeyeen dalxiiskii iyo maalgashigii tooska ahaa ee wadamada dibadda uga imaanayay.
Previous articleMadaxweyne Trump” Maalin murugo leh ayay noqonaysaa hadii Pyongyang aan u adeegsano talaabo Militari”
Next articleMadaxweyne Donal Trump” Maalin murugo leh ayay noqonaysaa hadii Pyongyang aan u adeegsano talaabo Militari”